कोहलपुर १ मा एमालेका गोपीलालको प्यानलै विजयी – Sadarline
रबिन्द्र सिंह ठकुरी / सदरलाइन
१५ असार, कोहलपुर (बाँके) : कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं. १ को मतगणना सम्पन्न भइसक्दासम्म एमालेका गोपीलाल खनालको प्यानलै विजयी भएको छ भने मेयरमा नेकपा एमालेले अग्रता लिएको छ । सुरुवातमा कांग्रेसले अग्रता लिए पनि वडा नं. १ को मतगणनाको अन्त्यसम्ममा एमालेले ५० बढी मतले अग्रता लिएको हो ।
नेकपा एमालेले मेयर पदमा ४१८, उपमेयरले ४६२ मत पाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले मेयर पदमा ३५४, उपमेयरमा ३२९ मत प्राप्त गर्नुको साथै नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मेयरमा ३८७, उपमेयरमा ३४१ मत प्राप्त गरेको छ ।
कोहलपुर १ मा एमाले बिजयी
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ मा नेकपा एमालेका गोपी खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै ५०९ मतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । वडा नं. १ मा खनालसँगै एमालेको सम्पूर्ण प्यानल नै बिजयी भएको हो ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले ३४४ मत र नेपाली कांग्रेसले २८० मत प्राप्त गरेका थिए । नेकपा एमालेले केहीबेर बिजयी जुलुस समेत गरेका थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष खनालले आफूले गरेको प्रतिवद्धता अनुरुप नै आफ्ना वडामा काम गर्ने बताएका छन् ।
सदरलाइनडटकम १७ असार नेपालगन्ज : राप्ती सोनारीमा नेपाली काँग्रेसको अग्रता कायमै रहेको छ । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार लाहुराम थारुले ४६६८ मतले अग्रता कायम गरेका हुन । उनलाई एमालेका तुलसीराम चौधरीले ४१५२ ले पछाई रहेका छन् । पूर्व सभासद समेत रहेका माओवादी केन्द्रका पट्टु थारु १४०५ मतले निक्कै पछाडि रहेका छन […]
४ असार २०७६, बुधबार १६:४०